Shaqo joojinta Beljimka wuxuu carqaladeeyay tababarka | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB32 BelgiumWeerarka Belgium wuxuu tegi doonaa tareenada
08 / 01 / 2016 32 Belgium, YURUB, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah
Shaqo joojinta ka dhacday Belgium waxay hakisay howlihii tareenka: Shaqo-joojinta darteed, duullimaadyadii gudaha ee ka socday magaalada Brussels inta badan waa la hakiyay, halka duullimaadyadii caalamiga ahaa gabi ahaanba la joojiyay.
Beljamka, duullimaadyada caalamiga ah waa la joojiyay halka duulimaadyadii gudaha ahaana si weyn loo carqaladeeyay shaqo-joojin ay bilaabeen shaqaalaha tareenka iyaga oo ka jawaabaya qorshaha jarista miisaaniyadda.
Beljamka, shaqo-joojinta shaqaalaha ayaa sii socota iyada oo laga jawaabayo xirmo dib-u-habeyn ah oo saadaalinaya in la jaray miisaaniyadda shirkadda tareenka ee ay dowladdu leedahay. Maalintii ugu dambeysay shaqo joojinta saacada 22.00, oo ka bilaabatay 48 maalinta Isniinta, tareenka ku yaal gobolka Walloon ee ku hadla Faransiiska, oo ay kujirto caasimada dalka, Brussels, wuxuu ku dhawaad ​​joogsaday, halka gobolka Fleish-ka ku hadla ee Dutch-ka uu la kulmay carqaladeyn boqolkiiba 30.
Tareenada Eurostar ee u dhexeeya London iyo Brussels waxay bilaabeen inay aadaan Lille, France. Thalys, oo ah shirkadda tareenka xawaare sare ku shaqeeya ee ka hawlgasha Paris-Amsterdam iyo Paris-Cologne iyada oo loo sii marayo magaalada Brussels, ayaan wax safarro ah sameynin shalay.
Xubnaha ururka ayaa ku soo ururay horteeda Saldhigga tareenka Midi Midi ee Brussels maalintii ugu dambeysay ee shaqo-joojinta, iyaga oo lugo lug ah ugu tagay Wasaaradda Shaqada.
Ururada shaqaaluhu waxay ku doodayaan in goynta dowlada ee miisaaniyada 20 ee wadada tareenka ee xirmada dib u habeeynta, oo hoos timaada tilaabooyinka austerity, ay sababi doonto in ugu yaraan hal 33 kun oo shaqooyin ah laga saaro 6 kun oo shaqaale ah. Hoos udhaca tirada shaqaalaha ayaa micnaheedu yahay in 6 maalin fasax ah sanadkasta shaqaalaha kale.
Gobolka Walloon ee ku hadla afka Faransiiska, ururada shaqaalaha ee ku hadla gobolka Flemish ee ku hadla afka Dutch-ka kama qeyb galaan shaqo joojinta, iyagoo ku doodaya wadahadalada socda inay la leeyihiin dowlada. Haddii heshiisku fashilmo, shaqo-joojin ayaa la filayaa Febraayo.
Burburka Beljimka wuxuu ku xiran yahay London-Paris Train Speed ​​Speed ​​Train
Shaqaalaha tareenada ee Belgian ee weerarka
Shaqaalaha Tareenka ee Qabsaday Howlaha Guud ee Beljamka
Burburinta Qalabka Bannaanka
Weerar ayaa ku bilowday IZBAN ... Burburinta Dhibbanayaasha ee Machadka Hawlgabka
Ogeysiiska Qandaraaska: Hal sanno oo dayactir ah, dayactir iyo shaqooyin ku-meel-gaar ah ee qalabka farsamooyinka iyo korontada ee saldhigga Polatli
Uludağ kuma jirto faa'iido la'aan